Yiphose kumabonwakude, ulwandiso lokusasaza imithombo yeendaba ukusuka ku-Ubuntu ukuya kwiChromecast | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Cast to TV GNOME. Olu lulwandiso lweGnome Shell efuna ukuyenza lula kubasebenzisi baka-Ubuntu hambisa umxholo wemultimedia kwikhompyuter yethu kwiTV ngeChromecast. Kule migca ilandelayo siza kubona ukuba siyifaka njani kwaye siyisebenzise.
Njengoko besenditshilo, Ukusasazwa kumabonwakude lulwandiso lweGNOME Shell esinokuthi ngayo Hambisa iividiyo, umculo, kunye nemifanekiso kwiChromecast okanye ezinye izixhobo kwinethiwekhi yendawo. Olu lwandiso luxhasa ukuhanjiswa kwevidiyo kubhabho (iividiyo ezingenakudlalwa ngokuthe ngqo kwisixhobo), Imixholo engezantsi enakho, ukubonisa umbukeli womculo ngelixa usasaza umculo, nokunye okuninzi. Ukulawula isixhobo, olu lwandiso luzakongeza iqhosha elitsha kwipaneli ephezulu ngolawulo lokudlala kwakhona.
Esi sisongezo seShell seGNOME ivumela abasebenzisi be-desktop be-GNOME ukuba basasaze nayiphi na ifayile yemithombo yeendaba egcinwe kwikhompyuter yethu kwisixhobo esikufutshane seChromecast.
1 Iimpawu ngokubanzi zoSasazo kulwandiso lweTV
2 Faka i-Cast kulwandiso lweTV
3 Sakaza imidiya kwiChromecast
Iimpawu ngokubanzi zoSasazo kulwandiso lweTV
Olu lwandiso luya kwenza ukuba kuthi kwenzeke hambisa iividiyo, umculo kunye nemifanekiso ukuya: Izixhobo zeChromecast, nasiphi na isixhobo esinomkhangeli wewebhu (enye iPC okanye i-smartphone), okanye usetyenziso lomdlali wemidiya (umzekelo, MPV, VLC).
Ixhasa imixholo engezantsi eyakhelweyo ngaphakathi nangaphandle.
Iya kusivumela dlala kwesinye isixhobo usebenzisa i-web player eyakhelweyo kwaye utshintshe umxholo ngaphandle kokuhlaziya iphepha lewebhu.
Ukutshintsha iividiyo kwifomathi exhaswayo kubhabho.
VAAPI / NVENC ikhowudi yevidiyo, ukhetho lokusebenzisa i-CPU esezantsi.
Sinako Sebenzisa inkqubo yethu njengolawulo olukude lweChromecast, Lawula ukudlala kwakhona kwibar ephezulu yeGnome.
Siza kukwazi hambisa umculo ngokubonakalayo, nangona ifuna i-CPU ekhawulezayo. Kwiseto seCast, unga vula umbukeli womculonjengoko ikhubazekile ngokungagqibekanga. Kukho nolunye useto olunokuthi lutshintshwe.
Ukudityaniswa kwemenyu yomxholo weNautilus.
Uluhlu lokudlala lwamajelo eendaba iyahambelana 'Tsala kwaye ulahle'.
Faka i-Cast kulwandiso lweTV
Kwabo bangaziyo, Izandiso zegobolondo ze-GNOME ziibhloko ezincinci zekhowudi ezandisa ukusebenza kunye neempawu zedesktop ye-GNOME. Unokucinga ngazo njengezandiso zebrawuza, kodwa kuphela kwidesktop.
Olu lwandiso luya kuvumela abasebenzisi ukuba basasaze umculo, iividiyo kunye neefoto ezivela kwikhompyuter yethu kwisixhobo seChromecast ongakhetha kuzo: ukufaka imithombo yeendaba kubhabho, seta indawo yokulawula isikrini kwisikrini, usete umyinge, okanye ujonge umbukeli womculo kwiTV xa udlala umculo.
Into eyimfuneko ngaphambi kokufaka ulwandiso, sisidibanisi. Ukuyifaka kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kuya kufuneka sibhale:
Nangona ulwandiso lweqokobhe le-GNOME, ifuna izinto ezimbalwa ukufaka. Inokuxhomekeka okuninzi, okuyimfuneko kwisixhobo ukuze sisebenze ngokufanelekileyo. Ngethamsanqa, zonke ziyafumaneka ukuze zifakelwe kwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu. Ukufakela konke oku kuxhomekeka, kuya kufuneka sivule i-terminal (Ctrl Alt T) kwaye senze umthetho kuyo:
Nje ukuba ukuxhomekeka kufakiwe, lixesha lokuba faka ulwandiso. Singakufumana oku kulandelayo unxibelelwano, eya kusisa kwiwebhu apho kuya kufuneka sisebenzise iswitshi kwaye ukhethe Faka.
Ukuba awukabi nakho okwangoku, iphepha liya kubonisa ukuba kufuneka ufake iplagi kwisikhangeli, njengoko ubona kule skrini ilandelayo. Konke okufuneka ukwenze kukucofa kwikhonkco eliqaqanjisiweyo ukuyifaka.
Nje ukuba ulwandiso lufakwe, ngaphambi kokuba uqhubeke kwaye uluvavanye, kukho ezinye izixhomekeki ezongezelelweyo ezifuna ukufakwa. Ukwenza oku, siza kubuyela kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kwaye sihambise isikhombisi sokwandiswa ngalo myalelo ulandelayo:
Emva koko siya kufuna kuphela ukwenza lo myalelo ukuya faka ukuxhomekeka:
Sakaza imidiya kwiChromecast
Ukuhambisa umxholo we-multimedia kwiChromecast, iqela lethu le-Ubuntu kunye neChromecast kufuneka lixhumeke kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi. Nje ukuba kwenziwe, kuya kufuneka ucofe kwindawo evulekileyo ukuvula i-GNOME iqokobhe lemenyu, emva koko ucofe ku «Umxholo weCast»Ukuyandisa.
Kule menyu sinokukhetha uhlobo lweendaba esifuna ukuhambisa. Ukukhetha esikwenzayo kuya kuvula iwindow yokukhangela eya kusivumela ukuba sihambe kwaye sikhethe ifayile. Xa siyikhetha, kufuneka ucofe nje kwi-Cast Media, kwaye ukuhanjiswa kuya kuqala kwangoko (ngaphezulu okanye ngaphantsi). Ukuba ayiqali, kuyakufuneka uye kukhetho «Okuthandayo»Kwaye uqwalasele isixhobo esifuna ukuthumela umxholo kuso.
Kuxhomekeka kwimodeli yeChromecast, ezinye iividiyo azinakudlala. Nangona kunjalo, Unokukhetha ividiyo yeTranscode, efuna ukuqinisekisa ukudlala kwakhona.
Kufuneka kuthiwe kwi ulwandiso lwewebhusayithi, bonisa ukuba ukusebenza kolwandiso kunokongezwa ngezinye izongezo. Nangona kufuneka nditsho ukuba ukhetho lokuqaqambisa idesktop, kwiimvavanyo endizenzileyo, khange lisebenze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Yiphose kumabonwakude, ulwandiso lokusasaza imithombo yeendaba ukusuka ku-Ubuntu ukuya kwiChromecast
I-chestnut chestnut. Ayisebenzi kum. Andisachithi xesha lam ndizama.
Ingca esemgangathweni sitsho
Inqaku lifanelekile, inqaku lonke lincanyathisiwe kwaye ekugqibeleni likuxelele ukuba khange lisebenzele yena, hahahahahahaha, hayi yena okanye omnye umntu. Ukuba ufuna ukuphatha iChromecast kakuhle, ndiza kukunika iingcebiso. Ukongezwa kwe-videostream kaGoogle, esebenza kuphela kwiChannel, kwizikhangeli ezisekwe kwiChannel ayizukusebenza, nokuba ikuvumela ufake ulwandiso. Kwaye i-Emby iyafana nePlex, kungcono kakhulu, uyifaka kwiphakheji yedebhu, icwangciswe ngokulula kakhulu kwaye ngeSpanish kwaye iyasebenza. Zombini, zombini i-videostream kunye ne-emby ine-mobile app, ubuncinci i-Android, iApple andazi kuba nditshaya kuphela ukhula olusemgangathweni. Ngeeapps ungalawula into onayo kwi-pc yakho kwaye uyidlulisele kwiChromecast, okoko nje iChromecast, i-pc kunye neselfowuni zikwiNethiwekhi enye. Olunye ukhetho yiVLC kodwa inengxaki yokuba imibhalo engezantsi ingabonwa kwiChromecast . Kwimibhalo engezantsi ye-Emby, akukho namnye kubo ongaphumeleliyo kwaye enye indlela enomdla kukudlala ngeChromecast, kodwa ubuncinci ayikaze yandisebenzela.
I-Plex nayo, kodwa bendixhome kakhulu kwaye ayiyiyo ingqolowa ecocekileyo, bayayazi ngamaxesha onke into oyenzayo kwaye ukuba usebenzisa inkonzo yabo yasimahla, eyeyona iqhelekileyo, ukubona ukuba siza kuthi iifayile ezithile zikhutshiwe i-Intanethi, ekungafuneki ukuba ikhutshelwe, bayakuxela, ulumke ngePlex. Apha uyithatha, hahahahahaha.
Ndoda, xa ndisithi kwinqaku ayisebenzi kum, ndithetha ukongeza ekufuneka uyifakele abantu abadala ukuze bathumele inkqubo yedesktop kwitv. Ulwandiso njengoko lunjalo, ukuba lusebenza ngokuchanekileyo.
IMontage, isixhobo sokwenza ikholaji yesithombe kwi-terminal